Mahavita Mampianatra Aho na dia Marenina Aza | Walter Markin
HAMAKY AMIN'NY TENY Afrikaans Albaney Alemà Amharique Anglisy Arabo Armenianina Armenianina (Andrefana) Aymara Azerbaijaney Azerbaijaney (Sirilika) Bashkir Bassa (Cameroun) Bengali Bicol Boligara Boulou Catalan Cebuano Chichewa Chitonga Chitonga (Malawi) Chitumbuka Chiyao Cinghalais Cinyanja Dangme Danoà Digor Douala Efik Espaniola Estonianina Failandey Fidjianina Fon Frantsay Ga Galoà Goujrati Goun Grika Guarani Géorgien Haoussa Hebreo Hiligaynon Hindi Hiri Motu Holandey Hongroà Ibanag Ibo Icibemba Iloko Indonezianina Iokrenianina Islandey Isoko Italianina Japoney Jula Kabiyè Kannada Kantôney Nentim-paharazana Kikamba Kikaonde Kikuyu Kiluba Kinyarwanda Kirghiz Kiribati Kirundi Kisonge Kongo Koreanina Kreôla any Haïti Kroaty Kurde Kurmanji Kurde Kurmanji (Caucase) Kurde Kurmanji (Sirilika) Kwangali Kwanyama Letonianina Lingala Litoanianina Luganda Lunda Luo Luvale Malagasy Malayalam Malezianina Mambwe-Lungu Mandarin Nentim-paharazana Mandarin Notsorina Marathe Masedonianina Maya Mbunda Mingrelian Mongol Mooré Motu Myama Ndebele Ndebele (Zimbabwe) Ndonga Norvezianina Nzema Népali Okpé Oromo Ossète Otetela Ouzbek Pangasinan Papiamento (Curaçao) Pendjabi Persianina Pidgin (Cameroun) Pidgin Nizerianina Pidgin any Amin'ny Nosy Salomon Poloney Portogey (Brezila) Quechua (Bolivia) Romanianina Rosianina Samoanina Sango Sepedi Serba (Sirilika) Serba (Soratra Romanina) Sesotho (Afrika Atsimo) Sesotho (Lesotho) Setswana Shona Sidama Silozi Sinoa Kantôney Notsorina Slovaky Slovenianina Soedoà Sranan Tongo Swahili Swahili (Congo) Swati Tagalog Tailandey Tajiki Tamoul Tatar Tchouvache Tenin’ny Tanana Alemà Tenin’ny Tanana Amerikanina Tenin’ny Tanana Angoley Tenin’ny Tanana Aostralianina Tenin’ny Tanana Brezilianina Tenin’ny Tanana Britanika Tenin’ny Tanana Espaniola Tenin’ny Tanana Failandey Tenin’ny Tanana Frantsay Tenin’ny Tanana Grika Tenin’ny Tanana Indianina Tenin’ny Tanana Italianina Tenin’ny Tanana Japoney Tenin’ny Tanana Kenianina Tenin’ny Tanana Kolombianina Tenin’ny Tanana Koreanina Tenin’ny Tanana Meksikanina Tenin’ny Tanana Paragoayanina Tenin’ny Tanana Perovianina Tenin’ny Tanana Poloney Tenin’ny Tanana Portogey Tenin’ny Tanana Romanianina Tenin’ny Tanana Rosianina Tenin’ny Tanana Silianina Tenin’ny Tanana Slovaky Tenin’ny Tanana Venezoelianina Tenin’ny Tanan’ny avy any Afrika Atsimo Tenin’ny Tanan’ny avy any Arzantina Tenin’ny Tanan’ny avy any Cuba Tenin’ny Tanan’ny avy any Ekoatera Tenin’ny Tanan’ny avy any Québec Tenin’ny Tanan’ny avy any Taïwan Tetun Dili Tigrigna Tiorka Tiv Tok Pisin Tongan Tseky Tshiluba Tsonga Turkmène Tuvalu Twi Tzotzil Télougou Urhobo Venda Vietnamianina Waray-Waray Wolaita Xhosa Yorobà Zandé Zapoteky (Andilan-tany) Zoloa Éwé
Mahavita Mampianatra Aho na dia Marenina Aza
Notantarain’i Walter Markin
Tamin’ny 1941 aho no natao batisa, tamin’izaho 12 taona. Tamin’ny 1946 anefa aho vao nahazo tsara ny fahamarinana ao amin’ny Baiboly. Fa nahoana? Aleo hotantaraiko anareo ny fiainako.
TANY Tbilissi, any Géorgie, ny ray aman-dreniko, fa nifindra tany amin’ny faritra andrefan’i Kanada tamin’ny 1910 tany ho any. Nipetraka tao amin’ny tranokely tao amin’ny toeram-pambolena iray tsy lavitra an’i Pelly, any Saskatchewan, ry zareo. Tamin’ny 1928 aho no teraka. Enina mianadahy izahay dia izaho no farany. Maty i Dada enim-bolana talohan’ny nahaterahako, ary vao herintaona aho dia maty i Neny. Maty koa i Lucy zokiko vavimatoa tsy ela taorian’izay, tamin’izy 17 taona. Nalain’i Dadatoa Nick izaho sy ny mpiray tam-po amiko, dia izy no nitaiza anay.
Nahita ahy nisintona rambona soavaly ny fianakaviako indray mandeha, tamin’izaho roa taona. Natahotra be ry zareo hoe ho voadaka aho, dia nikiakiaka hoe avelao ilay soavaly. Tsy naheno an’izany anefa aho dia tsy nihontsina mihitsy. Izaho koa nanome lamosina an-dry zareo. Soa ihany fa tsy naninona ahy ilay soavaly. Fa tamin’izay no fantatry ny fianakaviako hoe marenina aho.
Nisy namanay nilaza hoe sao dia tsara raha alefa mianatra miaraka amin’ny marenina hafa aho. Nampidirin’i Dadatoa Nick nianatra tao amin’ny sekolin’ny marenina any Saskatoon, any Saskatchewan, àry aho dia nifindra tany. Lavitra be ilay izy. Izaho koa vao dimy taona tamin’izany, dia natahotra be aho. Rehefa fety sy rehefa vakansy lehibe ihany aho vao afaka nitsidika ny fianakaviako. Lasa nahay tenin’ny tanana anefa aho tatỳ aoriana, dia nahafinaritra ahy ny niara-nilalao tamin’ny ankizy marenina hoatran’ahy.
NIANATRA NY FAHAMARINANA
Nanambady an’i Bill Danylchuck i Marion zokiko vavy tamin’ny 1939, dia ry zareo no lasa nikarakara ahy sy Frances zokiko vavy hafa. Ry zareo no havako nianatra Baiboly voalohany tamin’ny Vavolombelon’i Jehovah. Niezaka be izy ireo nampianatra ahy an’izay nianarany, rehefa nody aho nandritra ny vakansy lehibe. Tsy nahay tenin’ny tanana ry zareo dia sahirana aho nifampiresaka taminy. Hitany anefa hoe tiako ny zavatra nianarako momba an’i Jehovah. Lasa azoko koa hoe manaraka izay voalazan’ny Baiboly ry zareo, dia lasa nanaraka an-dry zareo nitory aho. Lasa te hatao batisa aho tsy ela taorian’izay. I Bill no nanao batisa ahy tamin’ny 5 Septambra 1941, tao anaty baríka vy feno rano nalaina avy tao anaty fantsakana. Nangatsiaka be ilay rano.
Niaraka tamin’ny marenina vitsivitsy, tamin’ny fivoriambe tany Cleveland, any Ohio, tamin’ny 1946
Namonjy fivoriambe tany Cleveland, any Etazonia, izahay rehefa nody aho tamin’ny vakansy lehibe tamin’ny 1946. Nifandimby nandray an-tsoratra ho ahy ny anabaviko tamin’ny andro voalohany, amin’izay aho afaka manaraka ny fandaharana. Faly be anefa aho tamin’ny andro faharoa, satria nahita marenina maromaro sy mpandika teny ho an’ny marenina. Lasa afaka nankafy tsara ny fandaharana aho. Nahafinaritra erỳ fa lasa azoko tsara ny fahamarinana ao amin’ny Baiboly.
NAMPIANATRA NY FAHAMARINANA
Vao nifarana ny Ady Lehibe II tamin’izany, dia te hiseho ho tia tanindrazana be daholo ny olona. Izaho kosa tapa-kevitra ny tsy hivadika amin’i Jehovah, rehefa niverina avy tany amin’ilay fivoriambe. Tsy nety nanangan-tsaina intsony aho tany am-pianarana, dia tsy nety nandray anjara tamin’ny fety koa. Tsy nankany am-piangonana niaraka tamin’ny mpianatra rehetra intsony koa aho. Tezitra ny mpampianatra, dia nampitahotra ahy sady nandainga tamiko mba hampiova hevitra ahy. Gaga ny mpiara-mianatra tamiko, dia lasa afaka nitory tamin’izy ireo aho. Nisy aza nanaiky ny fahamarinana, dia lasa mpanompon’i Jehovah tsy mivadika hatramin’izao. Anisan’izany i Larry Androsoff sy Norman Dittrick ary Emil Schneider.
Niezaka nitory tamin’ny marenina foana aho, isaky ny nitsidika tanàna hafa. Nankany amin’ny toeram-pivorian’ny marenina, ohatra, aho tamin’izaho tany Montréal, dia nitory tamin’ny ankizilahy iray mpitarika andiana marenina. Eddie Tager no anarany. Tao amin’ny fiangonana mampiasa tenin’ny tanana ao Laval, any Québec, izy mandra-pahafatiny tamin’ny herintaona. Tafaresaka tamin’ny ankizilahy atao hoe Juan Ardanez koa aho. Nanao hoatran’ny Berianina izy, satria nohamarininy tsara raha avy ao amin’ny Baiboly ny zavatra nampianarina azy. (Asa. 17:10, 11) Lasa mpanompon’i Jehovah koa izy, ary anti-panahy tao Ottawa, any Ontario, izy mandra-pahafatiny.
Nitory teny an-dalana, tamin’ny 1950 tany ho any
Nifindra tany Vancouver aho tamin’ny 1950. Marina aloha fa tsy misy tiako hoatran’ny mitory amin’ny marenina e! Nitory teny an-dalana tamin’ny vehivavy mandre atao hoe Chris Spicer anefa aho, indray mandeha. Nanaiky hanao famandrihana gazety izy, ary nasainy nitsidika an’i Gary vadiny aho. Nankany amin-dry zareo aho, dia niresaka ela be izahay. Soratra no nifampiresahanay. Tsy nihaona indray izahay raha tsy taona vitsivitsy tatỳ aoriana. Gaga be aho rehefa nanatona ahy ry zareo tany amin’ny fivoriambe iray tany Toronto, any Ontario. Hatao batisa i Gary tamin’io andro io. Nampahatsiahy ahy iny zava-nitranga iny hoe tokony hitory foana isika, na rahoviana na rahoviana ary na aiza na aiza. Mety ho lasa mpanompon’i Jehovah mantsy ilay olona.
Niverina tany Saskatoon aho tatỳ aoriana. Nisy renim-pianakaviana nihaona tamiko tany, dia nasainy nampianariko Baiboly ny zanany vavy kambana. Jean sy Joan Rothenberger no anaran’izy ireo. Marenina ry zareo, ary nianatra tao amin’ilay sekoly nianarako. Noresahin-dry zareo tamin’ny mpiara-mianatra taminy ny zavatra nianarany, dia dimy tamin’izy ireo no lasa Vavolombelon’i Jehovah. I Eunice Colin ny iray tamin’izy ireo. Tamin’ny taona farany nianarako tao amin’ilay sekoly no nahitako azy voalohany. Nomeny bonbon anankiray aho tamin’izay, dia nanontaniany raha te ho namany.
Izaho sy Eunice, tamin’ny 1960 sy tamin’ny 1989
Rehefa fantatry ny maman’i Eunice fa mianatra Baiboly i Eunice, dia nasainy nandresy lahatra azy tsy hianatra intsony ny talen’ilay sekoly. Nalain’ilay tale hatramin’ny boky nianarany Baiboly. Tapa-kevitra ny hanompo an’i Jehovah anefa i Eunice. Rehefa nieritreritra ny hatao batisa izy, dia nilaza ny dada sy mamany hoe: “Raha lasa Vavolombelon’i Jehovah ianao, dia tsy mipetraka ato aminay intsony.” Niala tao an-tranony àry i Eunice tamin’izy 17 taona, dia lasa nipetraka tany amin’ny fianakaviana iray Vavolombelona. Nanohy nianatra Baiboly izy, dia natao batisa tatỳ aoriana. Nivady izahay tamin’ny 1960. Tsy tonga tamin’ny mariazinay ny dada sy mamany. Rehefa nandeha anefa ny fotoana, dia lasa nanaja anay izy ireo, noho ny zavatra inoanay sy ny fomba nitaizanay ny zanakay.
NIKARAKARA AN’AHY FOANA I JEHOVAH
Nicholas sy Deborah vadiny, ao amin’ny Betelan’i Londres
Manan-janaka fito lahy izahay, ary mandre daholo izy ireo. Tsy mora ny nitaiza azy ireo. Nampianarinay tenin’ny tanana anefa ry zareo, dia afaka nampianatra Baiboly azy sy nifampiresaka tsara taminy izahay. Nanampy be anay koa ny rahalahy sy anabavy tao amin’ny fiangonanay. Nisy rahalahy iray, ohatra, nanoratra taratasy kely ho anay hoe niteny ratsy tao amin’ny Efitrano Fanjakana ny iray tamin’ny zanakay. Tonga dia afaka nanitsy azy izahay tamin’izay. Mbola manompo an’i Jehovah miaraka amin’ny vady aman-janany ny zanakay efa-dahy: I James, Jerry, Nicholas, ary Steven. Anti-panahy ry zareo. Ao amin’ny sampan’i Grande-Bretagne i Nicholas sy Deborah vadiny, ary manampy amin’ny fandikan-teny ho an’ny marenina. Anisan’ny ekipa mpandika teny ho an’ny marenina any Etazonia i Steven sy Shannan vadiny.
James sy Jerry ary Steven miaraka amin’ny vadiny, samy manampy amin’ny fitoriana amin’ny marenina
Maty i Eunice, iray volana talohan’ny faha-40 taonan’ny mariazinay, rehefa avy niady mafy tamin’ny kansera. Natanja-tsaina foana izy nandritra an’ilay izy narary. Tsy kivy mihitsy izy satria nanantena hoe mbola hatsangana amin’ny maty. Tsy andriko izay hahitana azy indray.
Faye sy James, Jerry sy Evelyn, Shannan sy Steven
Nianjera aho tamin’ny Febroary 2012, dia tapaka ny maojako. Tsapako hoe tsy hahavita tena intsony aho, dia lasa niara-nipetraka tamin’ny zanako lahy sy ny vadiny aho. Ao amin’ny fiangonana mampiasa tenin’ny tanana any Calgary izahay izao. Mbola anti-panahy aho. Izay aho vao tao amin’ny fiangonana mampiasa tenin’ny tanana. Mba eritrereto ange e! Tao amin’ny fiangonana mandre amin’ny teny anglisy foana aho, nanomboka tamin’ny 1946. Inona no nanampy ahy hifandray tsara amin’i Jehovah foana? Nampanantena izy hoe hikarakara ny kamboty ray, dia nitana ny teniny tokoa izy. (Sal. 10:14) Tena isaorako daholo izay nandray an-tsoratra ho ahy, sy nianatra tenin’ny tanana mba hifandraisana amiko, ary nandika teny ho ahy araka izay hainy.
Nanatrika sekolin’ny mpisava lalana tamin’ny tenin’ny tanana, tamin’izaho 79 taona
Tsoriko aloha fa kivy aho indraindray rehefa tsisy azoko izay lazain’ny olona, na rehefa hitako hoe tsy hain’ny olona ny manampy ny marenina. Lasa tsy te hanompo an’i Jehovah intsony aza aho tamin’ireny. Tsaroako anefa ny tenin’i Petera tamin’i Jesosy hoe: “Tompo ô, hankany amin’iza moa izahay? Ianao no manana ny tenin’ny fiainana mandrakizay.” (Jaona 6:66-68) Niezaka ny hanam-paharetana aho, hoatran’ny rahalahy sy anabavy maro marenina efa ela tao amin’ny fahamarinana. Nianatra ny hatoky an’i Jehovah sy ny fandaminany aho, ary tena nahasoa ahy izany. Mahazo boky sy gazety be dia be amin’ny tenin’ny tanana aho izao. Faly koa aho fa afaka mamonjy fivoriana sy fivoriambe amin’ny tenin’ny tanana. Tena sambatra sy afa-po aho manompo an’i Jehovah, ilay Andriamanitra tena miavaka.
Hizara Hizara Mahavita Mampianatra Aho na dia Marenina Aza
Hizara Hizara NY TILIKAMBO FIAMBENANA—FIANARANA Mey 2017